မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV က အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ လူငယ်အစီအစဉ် ကြိုဆို လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ လူငယ်အစီအစဉ်မှာတော့ ….
HL/ မှန်ကန်တဲ့ထောက်ပံ့မူတွေ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းပြမှုတွေပေးပါက လူငယ်တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို တိုးတက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း
HL/ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ လူငယ်တွေ အတွေးအခေါ်နဲ့ အမျှော်အမြင်တွေ ပိုမိုအားကောင်း လာစေဖို့ ဒဿနိကဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုက်စားဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အကြောင်း
HL/မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သင်တန်းဆင်းပြီးတဲ့ လူငယ်တွေ ဆေးပြန်မသုံးမိစေဖို့ စေတနာဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ ကူညီပေးသွားမယ့် သတင်း
စတဲ့ လူငယ့်ရေးရာ ရုပ်/သံ သတင်းပေးပို့မှုတွေနဲ့အတူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေကို ၄ တန်းကနေ့ ၁၀တန်းအထိ အခမဲ့သင်ကြားပေးနေ့တဲ့ ပညာဒါနကျောင်းအကြောင်း ရုပ်သံမှတ်တမ်း အစီအစဉ်ကိုလည်း ရှု့စားကြအုန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။ မွနျမာ့ရုပျမွငျသံကွား MRTV က အပတျစဉျ စီစဉျတငျဆကျပေးနတေဲ့ လူငယျအစီအစဉျ ကွိုဆို လိုကျပါတယျခငျဗြ။ ဒီသတငျးပတျရဲ့ လူငယျအစီအစဉျမှာတော့ ….
HL/ မှနျကနျတဲ့ထောကျပံ့မူတှေ ကောငျးမှနျတဲ့ နညျးလမျးပွမှုတှပေေးပါက လူငယျတှဟော နိုငျငံရဲ့ အနာဂတျကို တိုးတကျအောငျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျမှာဖွဈတယျလို့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျက ပွောကွားလိုကျတဲ့သတငျး
HL/ နိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့ ကွိုးပမျးနတေဲ့ လူငယျတှေ အတှေးအချေါနဲ့ အမြှျောအမွငျတှေ ပိုမိုအားကောငျး လာစဖေို့ ဒဿနိကဘာသာရပျကို လလေ့ာလိုကျစားဖို့ လိုအပျနတေဲ့ အကွောငျး
HL/မူးယဈဆေးဖွတျပွီး ပွနျလညျထူထောငျရေး သငျတနျးဆငျးပွီးတဲ့ လူငယျတှေ ဆေးပွနျမသုံးမိစဖေို့ စတေနာဝနျထမျး ကွီးကွပျရေးမှူးတှနေဲ့ ကူညီပေးသှားမယျ့ သတငျး
စတဲ့ လူငယျ့ရေးရာ ရုပျ/သံ သတငျးပေးပို့မှုတှနေဲ့အတူ ဆငျးရဲနှမျးပါးတဲ့ ကလေးတှကေို ၄ တနျးကနေ့ ၁၀တနျးအထိ အခမဲ့သငျကွားပေးနတေဲ့ ပညာဒါနကြောငျးအကွောငျး ရုပျသံမှတျတမျး အစီအစဉျကိုလညျး ရှု့စားကွအုနျးမှာ ဖွဈပါတယျခငျဗြ။
Previous articleမန်စီးတီးအသင်းမှာသာ ဆက်ရှိမယ့် ကွင်းလယ်လူ ဆာနေး
Next articleမြောက်ကိုရီးယား ပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အရာ နှစ်ခုအနက် တစ်ခုက ကီလိုမီတာ ၆၉၀ အထိ ရောက်ရှိခဲ့